Jarmalka oo muddo kordhin u sameeyay Saraakiil ciidan oo Somaliya ka jooga – STAR FM SOMALIA
Jarmalka oo muddo kordhin u sameeyay Saraakiil ciidan oo Somaliya ka jooga
Dowladda Jarmalka, ayaa waxa ay muddo kordhin u sameysay Saraakiil ciidan oo kaga sugan Magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka qayb qaata tababarada ciidanka Dowladda lagu siiyo gudaha dalka.
Golaha Wasiirada dalkaasi, ayaa kulan ay isugu yimaadeen, waxa ay ku ansixiyeen in muddo sanad ah Saraakiisha ciidan ay sii joogi karaan gudaha Somaliya, si ay uga qayb qaataan howsha ay Somaliya u joogaan.
Hada Jarmalka Somaliya, waxaa ka jooga 9 Saraakiil ciidan oo tababaro bixiya, muddo sanad ah ayaana loo sii ogolaaday inay ka howlgeli karaan gudaha dalka Somaliya.
Baarlamaanka Jarmalka ayaa u ogolaanaya ciidamada Jarmalka in tiro ku eeg ilaa 20 Askari ay ka joogi karaan Soomaaliya.
Saraakiisha ka socda dalka Jarmalka ee Somaliya ku sugan, ayaa bixiya Tababarada Midowga Yurub ay siiyaan ciidamada Xooga dalka Somaliya, tababaradaasi oo kolkii hore lagu bixin jiray dalka Uganda, balse hada Somaliya loo soo wareejiyay.
Dalka Somaliya waxaa ku sugan Saraakiil ciidan oo badan oo ka kala socda Dowladaha, UK, USA Imaaraadka Carabta, Talyaaniga Faransiiska iyo Dowlado kale oo badan, kuwaasi oo tallooyin kala duwan ku biiriya howlgalka Midowga Afrika ee gudaha dalka Somaliya.
Ciidamada Nabadsugida oo howlgal dad badan lagu qabtay ka sameeyay Gobolka Banaadir